HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Catalan Chichewa Chol Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Garifuna Grika Groenlandey Géorgien Haoussa Hindi Holandey Hongroà Ibo Indonezianina Iokrenianina Isoko Italianina Japoney Kannada Kinyarwanda Konkani (Romanina) Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Lingala Litoanianina Malagasy Malezianina Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Masedonianina Mongol Nahuatl (Afovoany) Norvezianina Nzema Ossète Pendjabi Persianina Poloney Portogey Quechua (Ayacucho) Rarotonga Romanianina Rosianina Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tajiki Tarasque Tatar Tchouvache Tigrigna Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Valencienne Xhosa Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal
Ny Tilikambo Fiambenana no gazety miparitaka indrindra eran-tany. Maherin’ny 42 tapitrisa amin’izy io no atao pirinty isaky ny laharana mivoaka. Ny Mifohaza! no manarakaraka azy satria 41 tapitrisa no indray mivoaka. Samy avoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah ireo gazety roa ireo, ary zaraina any amin’ny tany 236.
Ahoana ny amin’ny gazety hafa? Milaza ny Fikambanan’ny Mpanao Gazety fa ny AARP no mamoaka ny gazety be mpividy indrindra any Etazonia, ary natao ho an’ny olona 50 taona mahery izy io. Maherin’ny 22 400 000 amin’izy io no indray mivoaka. Ny an’ilay gazetiboky hoe ADAC Motorwelt any Alemaina kosa, 14 tapitrisa latsaka, ary ny an’ilay gazetiboky hoe Gushi Hui (tantara) any Chine, 5 400 000.
Gazetiboky Amerikanina Tamin’ny 2011
5 606 7436
Tatitra nomen’ny: Fikambanan’ny Mpanao Gazety
Ny gazety Yomiuri Shimbun any Japon kosa no mitana ny laharana voalohany, amin’ny gazety mpivoaka isan’andro. Folo tapitrisa mahery foana no isan’ny indray mivoaka.
Ny gazetin’ny Vavolombelona koa no mivoaka amin’ny fiteny be indrindra. Adika amin’ny fiteny 190 mahery Ny Tilikambo Fiambenana, ary amin’ny fiteny 80 mahery ny Mifohaza! Ny gazety Reader’s Digest kosa mivoaka amin’ny fiteny 21, ary tsy mitovy ny zavatra raketin’ireo gazety fa miovaova arakaraka ny firenena.
Tsy mitovy amin’ireo gazety tononina ato koa Ny Tilikambo Fiambenana sy ny Mifohaza! fa tohanana amin’ny fanomezana an-tsitrapo, tsy anaovana dokam-barotra, ary tsy amidy.
Ny tanjon’ny Tilikambo Fiambenana dia ny hanazava ny fampianaran’ny Baiboly, indrindra fa izay lazain’ny Soratra Masina momba ny Fanjakan’Andriamanitra. Mivoaka tsy tapaka io gazety io, nanomboka tamin’ny 1879. Miresaka zavatra samihafa kosa ny Mifohaza!, ohatra hoe momba ny zavaboary sy ny siansa, mba hanampiana ny olona hino ny Mpamorona. Asehony koa hoe azo ampiharina tsara eo amin’ny fiainana izay lazain’ny Baiboly.